Ingabe i-Organic Rank yakho ibalulekile? | Martech Zone
Ingabe i-Organic Rank yakho ibalulekile?
NgoLwesithathu, uDisemba 28, 2011 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
Isikhathi sokuthi ngiphazamise ezinye SEO izimpaphe futhi! Namuhla nginqume ukulanda izibalo zami ku-Google Search Console futhi ngenza okuthile ngokumba ithrafikhi engiyithola kusuka kusesho lwe-organic. Martech Zone iphakama ngokumangazayo ngamagama angukhiye amaningi anezinombolo eziningi ze- # 1 ngamagama angukhiye ancintisana kakhulu, aphezulu. Sonke siyazi ukuthi ukuphakama kwezinga, kukhuphuka izinga lokuchofoza ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha. Kepha ngabe lokho kunendaba esithombeni esikhudlwana?
Ungaphunguli ithrafikhi yakho yosesho oluphelele kusuka kumagama angukhiye ongalinganiseli kuwo noma anamavolumu wokusesha aphansi. Kuhlelo lwethu blog yezokumaketha, U-72% wethrafikhi yethu ephilayo ivela kokufakiwe okuyi- ngisho nasekhasini 1! Okuthakazelisa nakakhulu ukuthi sithola ithrafikhi ethe xaxa kusuka ezingeni le-8 kunaleso esikwenzayo esigabeni esingu-1!
Ngiyabona ukuthi lokhu kuzwakala kuhlambalaza, kepha udinga ukucabanga ngalokhu njengoba ubheka isu lokuthengisa lokuqukethwe. Ingabe kubaluleke kakhulu ukutshala imali ekulinganisweni ngevolumu ephezulu, amagama angukhiye ancintisana kakhulu? Lokhu kungafika ngesikhathi futhi kubize. Noma, ungasifaka yini isikhathi sakho emzameni wokuhlinzeka ngokuqukethwe okuhlukahlukene ngamagama asemisileni amade angabangi ukuncintisana kepha ahambisana kakhulu nenhlangano yakho?
Ukukhuluma iqiniso, sikhethe okwakamuva. Bengihlala ngicabanga ukuthi ukubeka # 1 kubaluleke kakhulu empumelelweni yethu. Kepha selokhu ngathola ukuthi ukufaka amandla amaningi kokuqukethwe okuhle kwakusitholela ukunakwa okwengeziwe jikelele. Izibalo aziqambi amanga ... ngenkathi isilinganiso sokuchofoza ekhasini lomphumela wenjini yokusesha singakhuphuka kakhulu njengoba ufika endaweni engu- # 1, ithrafikhi yethu esekwe ezingeni akukhathalekile kangako. Siyazi ukuthi singangena emiphumeleni emihle ngokuqukethwe okuhle… kungani singamane sisebenze kulokho futhi sengeze ithrafikhi yethu ephilayo ngokuqukethwe okuyikhwalithi, kwekhwalithi esikhundleni sokudubula i-bullseye njalo?
Yenza ukuhlolwa kwakho kwezinga lakho le-organic. Kukuphi iningi lakho Traffic evela? Umbuzo ongcono kakhulu, likuphi iningi lakho ibhizinisi evela? Ukuqagela kwami ​​ukuthi kuqhamuka ezinhlobonhlobo zemisila emide, usesho olufanele. Ngibonakalise nginephutha! 🙂
Angikulahli ngokuphelele isikhundla esiphakeme ngemigomo yokuncintisana kakhulu. Kuyinkomba enkulu yegunya futhi kungashayela ithrafikhi eningi. Futhi, ukubeka phezulu kwamanye amagama angukhiye kubukeka kuhambisana nokukleliswa phezulu kumagama amaningi ahlobene ahlobene. Inhlanganisela ingashayela ithani lomgwaqo. Ngimane ngikhuthaza indlela elinganiselayo. Esikhundleni sokuzama ukuthola i-homerun ngayo yonke i-bat-bat, kuhle njalo ngezikhathi ezithile ukuzama nje ukuthola isisekelo!
Ukuvuselelwa: Ngemuva kokwabelana ngalokhu okuthunyelwe, ngithole ukuthi akusimina ngedwa okubonile lokhu Chase Traffic, Hhayi Izikhundla.
Tags: ctrisikhundla se-googleGoogle +isikhundla segama elingukhiyei-longtailamagama angukhiye we-longtaili-pagerankusezingeniinyoka
Amathrendi eTop Tech wango-2011
Ukuzibandakanya kwevidiyo ngeDivayisi
Dec 28, 2011 ngo-4: 59 PM
Lokhu bekuyiposi enhle ngempela uDoug. Amadoda aqamba amanga, Abesifazane baqamba amanga, Izinombolo azenzi. Ngakho-ke kusuka ezinombolweni zakho, ngingathi uyabonakala - futhi okubaluleke kakhulu, izinkampani ezingabheki abathengi kufanele zibheke le ndlela. Ngiza ehhovisi izinsuku ezimbalwa ngesonto elizayo futhi ngiyasebenza - ngithanda ukujula kulokhu. (I-PS: Nginamasonto amabili ngifunda ku-tearttreehouse.com. Amanye ama-bodybodies anqume ukufunda ukubhala ikhodi yakhe. Yazisa uMnu Coley! Uzokhishwa kuyo! HA
Dec 29, 2011 ku-8: 03 AM
Igunya nomthelela kumagama angukhiye ahlobene kubaluleke kakhulu. Khumbula ukuthi i-Google Webmaster Tools ibonisa kuphela ingxenye yezinga (amagama angukhiye ayi-1,000).
Dec 29, 2011 ngo-7: 39 PM
Ngabe lokhu okuqukethwe kunama-adwords axhumene nakho futhi? Ngamanye amagama ubuthola ithrafikhi ekhokhelwayo evela ku-adwords futhi ukufakwa kuhlu kwezinto eziphilayo bekubonakala. Ngicabanga ukuthi i-adwords isebenza kangcono lapho uhlu lwayo oluhambisanayo lubonakala. Ngokunikezwa kokukhetha abantu bazocofa i-premium add (lapho enye ibonakala) lokhu kubangela ukuthi ama-adwords abe ngumthombo wethrafikhi futhi izinombolo zizopenda okuphilayo njengokubukeka kungabalulekile kepha iqiniso ukuthi i-CTR ngabe ngabe iphansi ngaphandle kwalezo zinto ezibekiwe.
Okuthunyelwe okuhle okukhuthaza.
Dec 29, 2011 ngo-7: 49 PM
@ktatgenhorst: disqus Cha, asenzi noma yiluphi usesho olukhokhelwe ukuthola ithrafikhi.
Dec 30, 2011 ngo-2: 52 PM
UDoug, iseluleko sakho sokugcina, jaha ithrafikhi, hhayi amazinga yilokho abantu abaningi abangakutholi. Kwesinye isikhathi ngicabanga ukuthi kungenxa yokuthi amazinga kulula, ithrafikhi inzima nokuguqulwa, kungaba ukuchofoza kwesikhangiso, ukuhola noma ukuthengisa kunzima kakhulu.
Mar 12, 2012 ku-2: 31 PM
Sawubona Doug, ngikuthandile lokhu okuthunyelwe kepha ngibe namazwana maqondana nencazelo yakho yamazinga we-SERP wale ndatshana. Uma ukuma kwakho kungukuthi ukwenza ngezifiso i-Google SERP kwenze incazelo ejwayelekile yokuma ku-Google “kungabaluleki, iyiphi incazelo yezinga oyisebenzisela lolu cwaningo? Ngamanye amagama, wenza isimangalo sokuthi u-72% wethrafikhi yakho uqhamuka kumagama angukhiye ongawabekeli ngisho nawo ekhasini lokuqala le-Google SERPs, kepha uma wonke umuntu enziwe waba ngewakhe, ubani ama-Google SERP okhuluma ngawo? * Othile * uthola ibhulogi yakho yalawo magama angukhiye, akunjalo? Futhi amathuba abawasesha ekhasini 1 njll lama-Google SERPs aphansi. Ngakho-ke kubo, Ubekwe ekhasini le-2,3,4, ngaphandle kwalokho kungenzeka ukuthi ngeke bakuthole kumanani amakhulu okhuluma ngawo.
Mar 12, 2012 ku-2: 36 PM
Empeleni, akunjalo Tod. Njengoba i-athikili ikhombisa, iningi lethrafikhi yokusesha engiyitholayo ALIQhamuki ekubekweni kwami ​​ekhasini lokuqala. Iphuzu lami akukhona ukuthi izinga ALIBALULEKILE… iphuzu lami ukuthi UKUVUSELEKA kubaluleke kakhulu UKUDLULA izinga. Uma ugxila kokuqukethwe kwakho futhi ubhala okuqukethwe okuhle, abantu bazokuthola. Kungakhathaleki ukuthi usezingeni elinjani.
Lokhu sikubona namakhasimende ethu. Ivolumu ephezulu, amagama asemqoka aphakeme ashayela ithrafikhi ethile kepha hhayi ukuguqulwa. Ukuguqulwa kuvela kumakhasi afanele kakhulu nokuthunyelwe kusuka kumagama angukhiye omsila omude kusuka ekubekweni kwe-SERP ngaphandle kwekhasi lokuqala. Futhi, ukuhambisana ngezinga.
Mar 12, 2012 ku-3: 06 PM
UDoug, udaba lwakho belucace bha ukuthi u-72% wethrafikhi yakho AKUQhamuki emibuzweni lapho ukala khona ekhasini 1 lama-SERP. Umbuzo wami usondele kakhulu kumqondo wokuthi "usezingeni" eminyakeni yokwenziwa ngezifiso kwe-SERP. U-72% wethrafikhi yakho yokusesha ye-organic ikuthole… ngandlela thile. Bakuthola kanjani uma ungekho ohlwini lwekhasi 1 kuleyo mibuzo? Ngabe ukwenza ngezifiso kwe-SERP kufike kude kakhulu ukuthi ikhasi lomuntu wonke lehluke kakhulu?
Mar 12, 2012 ku-3: 16 PM
Ngokwezinga elithile… Amanye amaklayenti ethu abona isigamu sokuvakashelwa kusuka kusesho olwenziwe ngezifiso. Kepha lokhu akukhona ukusesha okwenziwe kwaba ngokwakho ... Le datha ivela kuma-Webmasters. Laba ngabantu abachofoza ekhasini 1 elidlule befuna imiphumela EBALULEKILE.
Mar 12, 2012 ku-10: 40 PM
Bengihlala nginomqondo wokuthi lapho abantu bengakutholi abakufunayo ekhasini 1, bavele babuze imibuzo, babuze umbuzo ngenye indlela, kunokuba baye ekhasini 2. Yilokho engihlale ngikuzwa futhi iqiniso yilokho engikwenzayo njalo. Uma lokhu okushoyo kuyiqiniso, indlela abantu abasesha ngayo ishintsha kakhulu.
Mar 14, 2012 ku-12: 14 AM
Tod - nakanjani indlela engisesha ngayo. Kepha akupheli ukungimangaza ukuthi abanye abantu basesha kanjani. Isibonelo: Abantu abaningi, abaningi, abaningi bathayipha yonke imisho kuzinjini zokucinga kunamagama asemqoka ambalwa nje. Sisebenze namakhasimende ethu ekwakheni ama-FAQ athola ukuseshwa okuningi. Ngubani owaziyo?!
Mar 12, 2012 ku-5: 16 PM
UDoug, ngiyithanda kakhulu le ndatshana. Imantra yami bekulokhu kungamakhasimende kokuqukethwe kokuqala kwesibili. Uma okuqukethwe kwakho kukhanga kumakhasimende akho bazohlala bekuthola.
Mar 14, 2012 ku-12: 46 AM
Iningi lomgwaqo wami livela kokuthunyelwe yinsika engikubhalile eminyakeni eyedlule. Umsila omude unginikeza ukusakazwa okuvamile kwethrafikhi usuku nosuku. Igama elithi "insika yensika" liye lahlukunyezwa ngandlela-thile ngokuhamba kwesikhathi. Uma ngithi "okuthunyelwe kwensika" ngiqonde ukubhala okuqukethwe okwangempela okubonakalayo okuphathelene nendawo yami yesiza futhi kugcwalisa isidingo sangempela emphakathini. Hhayi ukukala okuqukethwe njengoba kwenza abanye. Ukuba ngowokuqala ukugcwalisa leso sidingo kusungule okuqukethwe kwami ​​ngeGoogebot njengeGunya esihlokweni.
Mar 14, 2012 ku-1: 58 AM
Ngiyabonga @blogbloke: disqus! Kuhle njalo ukuthola ukuncoma komunye wamaphayona. 🙂